Havandra - Wikipedia
Ny havandra dia karazana rotsak'orana miforona any anaty orambe rehefa mando ny rivotra ary rehefa mitsoka mafy ny rivotra miakatra. Kanety ny endrika alainy, ary mety ho 5 milimetatra ka hatramin'ny 10 santimetatra ny savaivon' ilay "kanety". Ny kaody METARn' ny havandra dia GR (grêle).
2 Jereo koa
2.1 Rohy ivelany
2.1.1 Miteny frantsay
Fiaviana[hanova | hanova ny fango]
Ny havandra dia miforona ao anaty rivotra mafana sy mando, ary mitsingilahila eo ambonin'ny hafanana ivainganana. Ny rivotra voaainga dia lasa ampoka satria ny hafanan 'ilay etona dia midina rehefa miakatra eny ambony araka ny lalàn' ny etona tonga lafatra. Ny rano ambiny dia mamorona ilay rahona ary avy eo mamorona ny orana. Mihitatra hatrany arakaraky ny herin-drivotra miakatra ny hangezan'ny havandra, ary mivaingana avy hatrany izy ireo. Mba hampivaingana ilay ranomandry dia tsy maintsy ao ambanin'ny hafanana ivainganana ny maripanan'ny tete-drano ary tsy maintsy mifandray amina vaonina invainginana. Raha tsy mahita io vaonina ivainginana io izy dia mijanona ho ranoka ary mijanona toy io foana raha mahery ny -39°C ny maripana, io zavatra io dia afahany mihakatra any an-tapon-drahona.
Rehefa mivaingana any ambonin'ny trôpôsfera (eo ambonin'ny soson-drivotran'ny tany) manan-kafanana latsaky ny -10°C ny tete-drano, dia lasa vaonina ivainginana izy. Amin'ilay tsindrin'ny entona fiampohan'ny ranomandry latsaky ny an'ny rano ao ambanin'ny 0°C, ny enton-drano ao anatin'ilay rivotra miakatra izany dia mora midanizina kokoa eo amin'ny vaonina ranomandry noho ny eo amin'ny rano. Ny havandra izany dia miitatra haingankaingana kokoa noho ny tete-drano ao anaty soson-drivotra mando tahaka ny rahon'orambe.
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Havandra
Hijery « havandra » any amin'ny Wikibolana.
Miteny frantsay[hanova | hanova ny fango]
((fr)) Principales tempêtes de grêle au Canada Archived Martsa 13, 2005 at the Wayback Machine
((fr)) Photographies de grêle en France sur le site de l'association Infoclimat.
((fr)) Association Nationale de lutte contre la grêle
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Havandra&oldid=1036697"
Voaova farany tamin'ny 28 Aogositra 2021 amin'ny 17:38 ity pejy ity.